Klopp oo si adag uga jawaabay shakiga laga qabo awooda ay Liverpool u leedahay inay sii wadato guulaheeda – Gool FM
(Liverpool) 11 Nof 2019. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa si adag uga falceliyay shakiga laga qabo awooda ay Liverpool u leedahay inay sii wadato guulaha, isagoo xusay inuusan dheg u dhigi doonin hadaladooda xun.
Liverpool ayaa halkeeda ka sii waday bndhigeeda fiican xilli ciyaareedkan ee Premier League, sababa la xiriira inay sii dheereysatay hogaanka horyaalka, kaddib markii ay kooxda Machester Ciy kaga adkaatay 3-1, kulan aad u xiiso badan oo ay ku wada ciyaareen garoonka Anfield.
Reds ayaa haatan ka sareysa kooxda ay ku dagaalamayaan hanashada horyaalka Premier League ee Machester Ciy 9 dhibcood nadiif ah.
Haddaba macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kaddib guushii ay ka gaareen Man City wuxuuna yiri:
“Dad badan ayaa sheegay in wixii xilligan ka dambeeya ay Liverpool guuldareysan doonto 100%”.
“Hagaag, taasi waxay ahayd filasho xun, laakiin si kasta oo ay tahay waa caadi haddii tani ay tahay fikirradooda wax dan ah kama lihin”.
“Waxaan si buuxda diirada u saarnay inta ay ciyaarta socotay oo dhan, bale ujeedkeena ma aheyn miiska kala sareynta”.
“Tani waa waalli, sagaal dhibcood, ma qiyaasi kartid inay dhici karaan waxa sidaas oo kale ah, laakiin ma ahan wax muhiim ah maxaa yeelay qofkii doonaya inuu noqdo kan ugu horreeya, wuxuu doonayaa inuu noqdo meesha ugu sareysa bisha May ee kaliya maahan November”.
“Dhamaanteen waan ognahay taas, uma baahna inaan ku celino sababtoo ah aragtidayda way cadahay”.